NguYeremiya 43 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 Kwathi, akugqiba uYeremiya ukuwathetha ebantwini bonke amazwi onke kaYehova uThixouThixo wabo, awamthuma wona uYehova uThixouThixo wabo kubo, onke la mazwi,
2 batsho ooAzariya unyanaunyana kaHoshaya, noYohanan unyanaunyana kaKareha, namadoda onke akhukhumeleyo, ukuthi kuYeremiya, Uthetha ubuxoki; uYehova uThixouThixo wethu akakuthumanga kuthi, ukuba uthi, Ze ningayi eYiputa niphambukele khona;
3 uBharuki ke, unyanaunyana kaNeriya, uya kuxhokonxa ngakuthi, kuba efuna ukuba sinikelwe esandleni samaKaledi, ukuba asibulale, ukuba asifudusele eBhabheli.
4 UYohanan unyanaunyana kaKareha, nabo bonke abathetheli bezimpi, nabantu bonke, abaliphulaphula ilizwiilizwi likaYehova lokuba bahlale elizweni lakwaYuda.
5 UYohanan unyanaunyana kaKareha, nabo bonke abathetheli bezimpi, bawathabatha onke amasalela akwaYuda, abebuye evela ezintlangeni zonke abegxothelwe kuzo, ukuba aye kuphambukela ezweni lakwaYuda:
6 amadoda, nabafazi, nabantwana, neentombi zokumkani, nemiphefumlo yonke abeyishiye uNebhuzaradan, umthetheli wabasiki, kuGedaliya unyanaunyana ka-Ahikam, unyanaunyana kaShafan, noYeremiya umprofetiumprofeti, noBharuki unyanaunyana kaNeriya.
7 Baya ke elizweni laseYiputa, ngokuba babengaliphulaphulanga izwi likaYehova; baya bafika eTapanesi.
8 Kwafika ilizwi likaYehova kuYeremiya eTapanesi, lisithi,
9 Thabatha ngesandla sakho amatyeamatye amakhulu, uwaqhusheke eludakeni endaweni yokutshisa izitena, esemnyango wendlu kaFaro eTapanesi, emehlweni amadoda akwaYuda.
10 Uze uthi kuwo, UtshoUtsho uYehova wemikhosi, uThixouThixo kaSirayeli, ukuthi, Yabonani, ndiya kuthumela ndithabathe uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, umkhonzi wam, ndiyibeke itroneitrone yakhe ngaphezu kwala matye ndiwaqhushekileyo; aneke isivatho sakhe esihle ngaphezu kwawo.
11 Uya kufika alibethe ilizweilizwe leYiputa, owokufa afe, owokuthinjwa athinjwe, owekrele abe ngowekrele.
12 Ndiya kufaka isikhuni ezindlwini zoothixo baseYiputa, azitshise zona, abathimbe bona, azithi wambu ngelizwe leYiputa, njengokuba umalusiumalusi ezithi wambu ngengubo yakhe; aphume kulo enoxolo.
13 Uya kuwaqhekeza amatye amisiweyo aseBhete-shemeshe, asezweni leYiputa, azitshise ngomlilo izindluizindlu zoothixo baseYiputa.
2 Kumkani 25:22, 26
UIsaya 9:8, 19:1
NguYeremiya 1:7, 2:16, 10:11, 15, 13:1, 15:2, 25:19, 27:6, 32:12, 38:4, 40:8, 10, 11, 41:10, 17, 42:1, 21, 44:1, 12, 13, 46:13, 25
UHezekile 29:1, 19, 30:1, 10, 13, 17, 18, 31:1, 32:1